QM: Iiraan waa marinka cusub ee dhuxusha Soomaaliya ee ay canshuuraan Al Shabaab - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka Radio Daljir
Image caption Dhuxul loo diyaariyey in la dhoofiyo
- In Al Shabaab ay jirintaankeeda ku xoojiso ganacsi iyo canshuuro.
- In Habka ay kooxda xagjirka ah u qaaddo canshuuraha uu ka hannaan wanaagsanyahay midka dowladda Soomaaliya.
- In Dhuxusha loo ekeysiiyo "alaab ka timid Iiraan".
"Shabakado dambiileyaal ah ayaa dalka Iiraan u adeegsada iney sii mariyaan dhuxusha sharci darrada ah ee laga dhoofiyo Soomaaliya, taasoo lacago malaayiin Doollar ah ay ka macaashto kooxda mintidka ah ee Al Shabaab" ayaa lagu yiri warbixinta.
Image caption Baraawe waxay ka mid ahayd meelihii dhuxusha laga dhoofin jiray
"Iran ayaa hadda marin cusub u noqotay ganacsiga noocaasi ah - waxayna tallaabadaas xad gudub ku tahay go'aankii ay Qaramada Midoobay ku mamnuucday in la dhoofiyo Dhuxusho Soomaaliya" ayaa lagu yiri qoraalka.
Image caption Dhirta dhuxusha laga dhigo ee la jaro ayaa xaaluf u keenta bii'ada
"Ganacsiga dhuxushu wuxuu kaalin weyn ka qaataa dakhliga soo gala Al Shabaab , waxayna kooxdu canshuur ahaan uga uruurisaa lacag dhan 7.5 malyan oo doollar" ayaa lagu yiri warbixinta.
"Warkaas waa la yiri, Dowladda Imaaraadka Carabta si buuxda ayay uga warqabtaa qaraarrada golaha ammaanka, si buuxda ayayna u taageersan tahay dhammaan cunaqabateynnada", ayay ku tiri Reuters.
Iyadoo hadalkeeda sii wadata ayay tiri "waxaan mar kale xaqiijineynaa inaan sii wadeyno wada shaqeynta aan la sameyno kooxda kormeerka, ilaa inta ay howshooda socoto".
Image caption Dhuxusha ka timaada Soomaaliya waxaa la sheegay in si khiyaano ah waddamo kale loogu sii dhoofiyo
Hababka uu kooxda Al shabab dhaqaalaha ku soo galo
Marka laga soo tago ganacsiga dhuxusha, Al shabaab ayaa lacago canshuuro ah ka qaadda gaadiidka isticmaala goobaha ay gacanta ku hayaan, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters.
Barta koontarool ee ay kooxdaas leedahay ee ugu weyn ayaa qiyaastii 160 kiilo mitir dhinaca waqooyi-galbeed ka xigta magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.
Goobtaas oo lagu istaajiyo gaadiidka ayey Reuters sheegtay iney ku taallo waddada isku xirta magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo.
Laga billaabo bishii Oktoobar ee sannadkii 2014-kii ilaa bishii Maarso ee sannadkan 2018-ka ayay kooxdu sidoo kale lacago badan oo canshuuro ah ka uruurisay meelo ka mid ah gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya.
Cunaqabateynta Dhuxusha iyo Hubka
Sannadkii 2012-kii ayuu golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay mamnuucay in la dhoofiyo dhuxusha Soomaaliya, si loo hor istaago in ganacsiga noocaas ah uu dhaqaale soo galiyo kooxda Al Shabaab oo gacan saar la leh ururka Al Qaacida.
Sannadkii 1992-kii ayuu horay golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay cunaqabateyn dhinaca hubka ah ku soo rogay Soomaaliya, taasoo looga gol lahaa in lagu yareeyo saameynta dagaallada sokeeye ee Soomaaliya ka billowday wixii ka dambeeyay markii xukunka laga tuuray dowladdii kacaanka ee uu madaxweynaha ka ahaa AUN Maxamed Siyaad barre.
Hase ahaate mas'uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya ayaa hadda si joogto ah u dalbada in dalka laga qaado cunaqabateynta hubka, si awood loogu yeesho dagaalka ka dhanka ah Al Shabab oo wali gacanta ku heysa qeybo ka mid ah waddanka Soomaaliya.